Iran oo duqeysay saldhigyo Mareekanka uu ku leeyahay Ciraaq | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Worldnews Iran oo duqeysay saldhigyo Mareekanka uu ku leeyahay Ciraaq
Wasaaradda Gaashaandhiga ee Mareykanka ayaa sheegtay in laba saldhig oo ay leeyihiin ciidamada milateriga Mareykanka, kuna yaala gudaha dalka Ciraaq lagu weeraray gantaalo.
Telefishenka Dowladda Iran ayaa sheegay in weerarka lagu qaaday saldhigyada Mareykanka uu ahaa mid loogu aargudayay dilka Qasem Suleimani oo shalay la aasay.
Sidoo kale weerarka ayaa waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Javad sharif oo sheegay in Iran ay aargoosatay.
“Iran waxay weerarkan qaaday iyadoo eegeysa axdi qarameedka Qaramada Midoobay ee 51, waxayna duqeysay saldhigyadii sida fuleynimada ahaa looga soo weerary muwaadiniinteena, mana raadineyno dagaal ee waxaan difaaceynaa nafsadeena”, ayuu kusoo qoray bartiisa Twitter-ka.
Mareykanka ayaa sheegay in Iran ay bartilmaameedsatay saldhigyo uu ku leeyahay Irbil iyo Al Asad ee gudaha dalka Ciraaq. Ilaa iyo hadda ma cadda in uu jiro khasaaro ka dhashay weeraradaas iyo haddii uu jiro inta uu la eg yahay.
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa sheegay in xaaladda ay wanaagsan tahay, saldhiyo Mareykanka uu leeyahayna lagu weerarya gudaha dalka Ciraaq, qiimeynna ay ku sameynayaan sida ay wax u dhaceen, dibna ay kasoo sheegi doonaan.
Warbixin u soo saaray afhayenka aqalka cad ayaa lagu sheegay in arrintan ay ka war hayaan.
“Waan ka war qabnaa weerarka lagu qaaday saldhigyadeena Ciraaq, madaxweynaha waa lagu wargeliyay arrintan, si dhaw ayuuna ula socdaa oo wuxuu darsayaa xaaladda isagoo latashanaya lataliyeyaashiisa dhanka ammaanka”, ayaa lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka.
Warbaxin ay baahisay warbaahinta ay maamusha xukumada Iran ee IRNA ayaa loogu digay dhamaan wadamada xulafada la ah Mareykanka ee dalalkooda u oggolaaday in ay saldhigyo ku yeeshaan.
Weeraradan ayaa dhacay saacado un ka dib markii la soo gabagabeeyay aaska Qaseem Suleymani.
Madaxweeyne Donald Trump ayaa horay u sheegay in hadii ciidamada Mareykanka lasoo weeraro ay iyaguna weerari doonaan Iran.